ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडल : प्रतियाेगीले भिडियाे पठाउन ४ दिन बाँकी
नेपाली पब्लिक बुधबार, चैत २५, २०७७
ग्लोबल एनआरएन सिंगिङ आइडल, सेकेन्ड जेनेरेशन – २०२१’ को डिजिटल अडिशनको समय ४ दिन बाँकी रहेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, मध्यपूर्व क्षेत्रीय युवा विभागले आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगितामा सहभागि हुन चाहानेले डिजिटल अडिशनको भिडियो आउँदो शनिबार (अप्रिल १०) सम्ममा तोकिएको ठेगानामा पठाउनुपर्नेछ।
एनआरएनए मध्यपूर्व युवा विभागका संयोजक राज रेग्मीका अनुसार डिजिटल राउण्डमा उल्लेख्य संख्यामा भिडियोहरु उपलब्ध भइरहेका छन्। ‘डिजिटल राउण्डमा उत्साहजनकरुपमा प्रतियोगीको भिडियोहरु प्राप्त भइरहेको छ,’ संयोजक रेग्मीले भने, ‘हामी अझै ठूलो संख्यामा प्रतियोगीहरु सहभागी होउन् भन्ने चाहन्छौं।’
संयोजक रेग्मीले नेपाली कला, संस्कृतिको संरक्षण एवं प्रवासमा बसेर संगीत साधना गरिरहेका नेपाली प्रतिभाहरूलाई पहिचान एवं प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको जानकारी दिँदै अझै समय रहेकाले सहभागी हुन चाहानले उल्लेखित ठेगानामा भिडियो पठाउन आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, एनआरएन सिंगिङ आइडलका निर्णायकहरुले पनि प्रतियोगितालाई लिएर आफूहरु निकै उत्साहित रहेको बताएका छन्। नेपाली कला, संस्कृतिको संरक्षणमा मध्यपूर्व युवा विभागले सराहनीय कामको शुरुवात गरेको बताउँदै उनीहरुले गायनमा रुची भएका प्रवासी नेपालीका लागि यो सुवर्ण अवसर रहेको जानकारी दिएका छन्। एनआरएन सिंगिङ आइडलको निर्णायकमा गायक उदय सोताङ, गायिका सुनिता दुलाल, गायक विजय लामा र प्राश्ना शाक्य रहेका छन्।
आइडल विजेता प्रतियोगीले दुई लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन्। द्वितीय पुरस्कार एक लाख रुपैयाँ, तृतीय पुरस्कार ५० हजार रुपैयाँ र चौथो २५ हजार रुपैयाँ रहेको रेग्मीले बताए। ग्राण्ड फिनालेमा प्रवेश पाउने ५ जना प्रतियोगीलाई गीति एल्बममा गीत गाउने अवसर प्रदान गरिने जानकारी उनले दिए। आगामी अप्रिल १६ र १७ तारिखमा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने छ।
एनआरएन सिंगिङ आइडलसम्बन्धी सबैभन्दा बढी सोधिएका प्रश्नहरु र तिनीहरुको उत्तर :
को सहभागी हुन पाउने ?
– सार्क मुलुकबाहेक अन्य देशमा रहेका नेपालीहरु (४० वर्षसम्मका)। म्यानमारमा रहने नेपालीले सहभागी हुन पाउनेछन्।
डिजिटल अडिशनमा कहिलेसम्म भिडियो पठाउनुपर्ने ?
– अप्रिल १० (नेपाली मिति चैत्र २८ गते शनिबार)सम्ममा पठाउनुपर्नेछ।
भिडियो कति लामो हुनुपर्ने ?
– भिडियो बढीमा २ मिनेट लामो हुनुपर्नेछ।
कुन देशमा भएका सहभागीले कुन ठेगानामा भिडियो पठाउनुपर्ने ?
– सहभागी हुन चाहानेले सफा र प्रष्ट अडिसन भिडियो आ–आफ्नो राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई पठाउनुपर्नेछ । र सोही भिडियो आयोजक कमिटीलाई सीसी गर्नुपर्नेछ।
कस्तो भिडियो पठाउनुपर्ने ?
– सहभागीले ट्रयाकबिना गीत गाएको सफा र प्रष्ट अडिसन भिडियो पठाउनुपर्नेछ। सहभागीले चाहेमा म्युजिकल उपकरणहरु(जस्तै गिटार) को प्रयोग गर्न पानेछन्।
छनोट प्रक्रिया कस्तो हुनेछ ?
– सहभागीहरुले पठाएको भिडियो राष्ट्रिय समन्वय परिषले हेरेर क्षेत्रीय समितिलाई छनौटका लागि पठाउने छ। प्रत्येक क्षेत्रीय समितिले छनौट गरी कम्तीमा १२ जना प्रतियोगीको भिडियो क्लिप आयोजक कमिटीलाई पठाउनेछ । आयोजक कमिटीले प्राप्त प्रतियोगीहरूको भिडियो क्लिपलाई निर्णायक मण्डललाई पठाउने र डिजिटल अडिसनको भिडियोलाई निर्णायक मण्डलले मूल्याङ्कन गर्दै पहिलो चरणमा जम्मा प्रतियोगीमध्येबाट ३७ जना प्रतियोगीलाई मात्र छनौैट गरी ओपनिङ राउण्डमा लगिनेछ।
डिजिटल अडिशनमा छनोट भएको जानकारी सहभागीले कसरी पाउनेछन् ?
– डिजिटल अडिशनबाट ३७ जना उत्कृष्ट प्रतियोगीहरु छनोट हुनेछन् । छनौट भएका ३७ जना प्रतियोगीहरूको नामावली १३ अप्रिल २०२१ मा प्रकाशन गरी आयोजक समितिले प्रत्येक क्षेत्रीय समितिलाई जानकारी गराउनेछ। क्षेत्रीय समितिले सम्बन्धित सहभागीलाई जानकारी गराउनेछ।
ओपनिङ राउण्डमा छनोट भएपछिको विजेता कसरी छनोट गरिनेछ ?
– ओपनिङ राउन्डलाई ३ चरणमा बाँडिने र डिजिटल राउन्डबाट छनौट भएर यस राउन्डमा प्रवेश गरेका ३७ जना प्रतियोगीमध्ये अन्तरा राउन्डबाट १२ जना प्रतियोगी बाहिरिने र २५ जनाले ओपनिङ राउन्डको सारेगम राउन्डमा प्रवेश गराउने नियम तय भएको छ।
ओपनिङ राउन्डको सारेगम राउन्डबाट थप १२ जना प्रतियोगी बाहिरिने र बाँकी १३ जना प्रतियोगीले पियानो राउन्डमा प्रवेश पाउने छन। ती प्रतियोगी स्वतः फाइनल राउन्डमा सहभागी हुन पाउने छन्।
फाइनल राउन्डलाई ३ चरणमा विभाजित गरिने छ। जसमा ओपनिङ राउन्डको पियानो राउण्डमा प्रवेश गरेका १३ जना प्रतियोगीमध्ये पहिलो चरणबाट ४ जना प्रतियोगीहरू बाहिरिने छन्। ९ जना प्रतियोगीहरूले दोस्रो चरणमा प्रवेश पाउनेछन्। दोस्रो चरणबाट थप ४ जना प्रतियोगी बाहिरिने र अन्तिममा ५ जना प्रतियोगीले ग्राण्ड फिनालेमा प्रवेश पाउनेछन्।
प्रतियोगीले ग्राण्ड फिनालेमा १–१ वटा गीत गाउनेछन्। त्यही गीतका आधारमा १ जना प्रतियोगी बाहिरिने र ४ जनालाई प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो घोषणा गरिनेछ।
#ग्लोबल_एनआरएन_सिंगिङ_आइडल #डिजिटल_अडिशन #राज_रेग्मी
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २५, २०७७ १९:३९
बुधबार, कात्तिक ३, २०७८ २०:४० प्रधानमन्त्री देउवा सुदूरपश्चिम जाँदै